यो वर्ष यी सात राशीको प्रेम जीवन हुनेछ सु'खमय -
[ May 17, 2021 ] श्रीमानले हानेर टा’उको फु’टाइदिए, छोरी र मलाई लिन त्यो दिन देखि क’हिल्यै आएनन – गायिका मधु छेत्री(भिडियो) समाचार
[ May 17, 2021 ] श्रीमानले मलाई चाहे तर मैले अर्कैलाई चाहेर गए, गल्ति भयो भन्दै श्रीमतीले माफी मागेपछि श्रीमानले अंगालो हा’लेर स्वीकार गरे (भिडियो सहित) समाचार
[ May 17, 2021 ] कोराना भाइरसको सं’क्रमणबाट नेपाल प्रहरीका असईको दु:खद नि’धन समाचार
[ May 17, 2021 ] कोरोना संक्र’मणबाट नर्स सावित्री भट्टराईको दुखद नि’धन समाचार
[ May 17, 2021 ] मुलुकभर आज थपिए ९ हजार २४७ कोरोना सं’क्रमित, २१४ को मृ’त्यु समाचार
Homeराशिफलयो वर्ष यी सात राशीको प्रेम जीवन हुनेछ सु’खमय
यो वर्ष यी सात राशीको प्रेम जीवन हुनेछ सु’खमय
May 4, 2021 admin राशिफल 357
मेष राशिका जा’तक सिंगल छन् र प्रेमको खोजीमा छन् भने सन् २०२१ को वर्षमा उनले विशेष मानिस भेट्ने संभा’वना प्रबल छ । यो वर्षमा प्रेम’मय जीवन बिताउने उत्तम समय रहेको छ । विवाहितले सुखद् दाम्पत्य जीवन बिताउने छन् । सम्बनध जोडिए’काहरुको पनि यो वर्ष सुमधुर जीवन रहनेछ । तथापी पार्ट’नरसंग नकारात्मकता कुरा गर्नबाट बच्नुहोस् ।
वृष राशीका जातक’का लागी सन् २०२१ को वर्ष सम्बन्धमा प्रेम र उत्साह लिएर आएको छ । सिंगल’को जीवनमा खास व्यक्तिको आवाग’मन हुने संभावना प्रबल छ । यस वर्ष विपरीत लिङ्गी नयाँ साथी बन्ने र पछि उहि जीवन’साथी बन्ने संभावना छ । तसर्थ जीवनमा आएका नयाँ व्यक्तिलाई नजर’अन्दाज नगर्नुहोला ।
मिथुन राशीका जात’कका लागी सन् २०२१ को वर्ष अत्यन्त शुभ रहेको छ । सिंगल रहेका जातकको जीवनमा प्रेम प्राप्तीको योग छ । यस राशीका जातकले आफ्नो पार्ट’नरलाई अत्यन्त धेरै खुसी दिने समय रहेको छ । यस वर्ष जीवनसाथीसंग खुलेर समय बिताउने समय रहेको छ । मिथुन राशिका वि’वाहयोग्य जातक विवाह बन्धनमा बाधिने संभावना छ ।
पहिलेबाटै सम्बन्धमा रहेका कन्या राशीका जातक’का लागी प्रेम प्रस्ताव गर्ने उचित समय छ । यो समय मन परेको मानिसलाई गरेको प्रस्तावको सकारा:त्मक जवाफ आउन सक्छ । सिंगलकालागी नयाँ व्यक्तिको आवागमनले जीवनमा नयाँ रंग थप्ने संभावना छ । साथै विवाहका लागी पहल थालेमा यो वर्ष वि’वाह हुन सक्छ ।
वृश्चिक राशीका जात’कलाई सन् २०२१ को वर्ष आफू अनुकूल रहनेछ । शुक्र र बृह’स्पतिको प्रभावका कारण नयाँ प्रेम पाउन मद्दत पुग्नेछ । पहलेबाटै सम्बन्धमा रहेकाहरुले मन परेको मानि’सबाट प्रेम प्रस्ताव पाउन सक्नेछन् । बृहस्पति गोच’रका साथै यस राशीका जातककालागी सबै समस्या तथा कष्ट नि’वारण हुने उत्तम समय छ ।
मकर राशीका सिंगल जातक’कालागी उपयुक्त साथी खोज्न सन् २०२१ को वर्ष उत्तम रहनेछ । यस वर्ष भेटिएको नयाँ व्यक्तिले मनमा डेरा जमाउन सक्नेछ । पुराना साथी वा कार्या’लयका सहयोगीसंग प्रेम हुन सक्नेछ । यो वर्ष मकर राशीका जा’तकले आफ्नो प्रेम जीवनमा अद्भुत अनुभव पाउनेछन् ।
सन् २०२१ को अप्रिल २० पछि कुम्भ राशी’का सिंगल जातककालागी शुभ रहनेछ । यो वर्ष आफ्नो इच्छा अनुसारको प्रेमी प्रेमिका वा जीवनसा’थी भेटिनेछ । यहि कारणले यस राशीका जातकको भाग्यमा वृद्धि समेत हुनेछ । आगामी महिना अप्रिल, मे, अगस्ट, से’टेम्बर र डिसेम्बरमा विवाह हुने संभा’वना र विवाह बन्धनमा बाधिन उपयुक्त समय रहेको छ ।
नेपाली युवक दिवेश पोखरेलले फेरी गरे ‘अमेरिकन आइडलमा’ क’माल, पुगे टप सेभेनमा
May 6, 2021 admin राशिफल 327
मेष राशि (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ) गरिरहेको काममा त्यती मन न’लाग्नाने सामान्य अप्जस आईपर्ने छ । ब्यापार ब्यबसायमा राम्रो समय रहेको छ । खानपानको कारणले स्वास्थ सम्बन्धि समस्या उत्पन्न हुन
February 8, 2021 admin राशिफल 1452
आज कार्तिक १९ गते बुधबारको राशिफल हेरेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्
November 4, 2020 admin राशिफल 3210
मेष (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ) – हठ गर्ने बानीले दुःख पाइएला । तर धैर्यता’का साथमा प्रयत्न गर्दा मनग्ये फाइदा उठाउन सकिने दिन पनि हो । मनमा आलस्य र अल्छीपनको निवास
श्रीमानले हानेर टा’उको फु’टाइदिए, छोरी र मलाई लिन त्यो दिन देखि क’हिल्यै आएनन – गायिका मधु छेत्री(भिडियो)
श्रीमानले मलाई चाहे तर मैले अर्कैलाई चाहेर गए, गल्ति भयो भन्दै श्रीमतीले माफी मागेपछि श्रीमानले अंगालो हा’लेर स्वीकार गरे (भिडियो सहित)
कोराना भाइरसको सं’क्रमणबाट नेपाल प्रहरीका असईको दु:खद नि’धन
कोरोना संक्र’मणबाट नर्स सावित्री भट्टराईको दुखद नि’धन
मुलुकभर आज थपिए ९ हजार २४७ कोरोना सं’क्रमित, २१४ को मृ’त्यु
सुतेर पनि इम्युनिटी पावर बढाउन सकिने यस्तो छ जन’स्वास्थ्य विज्ञ डा. पाण्डेको सुझाव (175261)
भाण्टा खाँदा हुने १३ फाइदा’हरु (168980)
कपालमा चाँया परेर हैरान हुनुहुन्छ ? यी हुन् चाँया हटाउने घरेलु उपाय… (168765)
विवाहित महिलाले किन सिउँदोमा सिन्दुर लगाउँछन् , जान्नुहोस रहस्य.. (168391)
छोटो समयमै छिटो कपाल बढाउने तरीका यस्तो छ: थाहा पाहुनुहोस् (167384)
सुशान्त केश’ले लियाे नयाँ मोड, रियाको भाइको ‘गोप्य च्याट’ बाहिरियो…हेर्नुहोस् (166164)
यसरी बनाउनुहाेस्: मात्र केही समयमानै तपाईंको पहेलो दाँत चम्किलो … (165609)
चर्चित हाँस्यकलाकार तथा समाजसेवी धुर्मुसको जन्मदिन आज, कति वर्ष लागे उनी ? थाहा पाउनुहोस् (164088)
लियोनेल मेसी बने विश्वको सबैभन्दा बढी कमाउने फुटबलर, कति कमाए त उनले ? थाहा पाउनुहोस् (158680)
श्रीमान विदेशमा दिनरात दुःख गर्दै, यता श्रीमती आफ्नै श्रीमानको साथीसंग भागेपछि, सबैलाई रुवाउने कथा (145543)